Pregnancy – Schwangerschaft – Tips for refugees
Category: Pregnancy – Schwangerschaft
Anigu waxaan ahay gabar 17-sanno jir ah waxaana jeclahay in aan maalin noqdo hooyo. Laakiin qoyskaygu midaasi ma doonayaan. Waxaa igu adag in aan wax cusub barto. Sidaas darteeda waa in aanan hooyo noqonin. Waxaan u malaynaa midaasi in ay tahay mid aanan cadaalad ahayn. Miyay tahay in aanan noqonin hooyo marka aan weynaado?
Waxaad u baahantahay in aad midaan kala hadashid qoyskaaga.
Waxaad heli kartaa caawimaad ku saabsan sida aad midaan u samaynaysid.
Waxaa laga yaabaa in aad caawimaad ka heshid qof weyn oo aad ku kalsoontahay.
Sidoo kale waxaa jira meelo lagu-magacaabo xarumaha latalinta meelahaas oo aad ka heli kartid caawimaad.
Gudaha dalka Jarmalka haweenay kasta waxay noqon kartaa hooyo.
Laakiin khasab kuguma ahan in aad hooyo noqotid.
Go’aanku ma ahan mid fudud.
Weli waxaad haysataa wakhti baddan si aad go’aankaasi u qaadatid.
Waa arin wanaagsan in aad wakhtigaaga qaadatid si aad u gaartid go’aankan.
Xarumaha latalinta waxay sidoo kale kugu caawin karaan in aad go’aanka qaadatid.
Haddii aad noqotid hooyo, weligaaga waxaad ahaanaysaa hooyo.
In aad hooyo noqotid ma ahan arin fudud.
Waxaad caawimaad ka heli kartaa: http://www.behinderte-eltern.de/Papoo_CMS/index.php?menuid=98
Ilmaha wuxuu qaataa wakhti iyo lacag aad u baddan.
Ilmahaaga waa in uu ficnaadaa.
Ilmahaaga sidoo kale waa in uu noqdaa mid faraxsan.
Waa arin wanaagsan marka ay dadku kugu caawiyaan in aad midaan samaysid.
Waxaan ahay qof uur leh. Waxaana doonayaa in aan ilmaha dhallo. Maxaa ila gudboon in aan sameeyo hadda?
Midaan waa isbedel aad u weyn oo noloshaada lasoo gudboonaanaya.
Adiga waxaa laguu oggolyahay in aad go’aansatid waxa xiga ee aad samaynaysid.
Midaasi waa masuuliyad weyn.
Laakiin waxaa jira dad badan oo midaasi kugu caawin kara.
Waa muhiim in aad ka taxadirtid nafsadaada.
Midaasna waxaa kamid ah caafimaadkaaga.
Waa in aad booqatid dhakhtarka dumarka.
Waxay kugu samayn doonaan baaritaan.
Sidoo kale waxay kusiin doonaan naseexooyin kusaabsan sidii aad ku ahaan lahayd qof caafimaad qabba.
Wixii kusaabsan su’aalo kale waxaa jirta xarunta tallada uurka.
Dadka halkaas jooga waxay kaaga jawaabi doonaan su’aalahaaga.
Waxaad mid ka heli kartaa boggaan soo socda:
Waxaa dhici karta in aad u baahatid qof kugu caawiya in aad xarunta raadisid.
Bogga internetka ah hadda wuxuu ku qoranyahay kaliya luuqada Jarmalka.
Waxaa dhici karta in aad meesha u wadatid turjubaan.
Posted on July 26, 2016 Author editorialteamCategories Pregnancy - Schwangerschaft